Kali Only ပဲ သုံးမှာဆိုရင် Entire Disk လုပ်သင့်လား? Dual ဆိုရင်ရော HDD ကို ဘယ်လိုပိုင်းသင့်လဲ? - Khit Minnyo
Q & A Kali Only ပဲ သုံးမှာဆိုရင် Entire Disk လုပ်သင့်လား? Dual ဆိုရင်ရော HDD ကို ဘယ်လိုပိုင်းသင့်လဲ?
by KhitMinnyo on January 16, 2019 in Hacking Lab, Kali, Q & A
By KhitMinnyo on January 16, 2019
Bl@ck_b0x February 14, 2019 at 4:45 AM
oeakkeroo September 20, 2019 at 2:05 PM